WINDOWS 10 NHỌRỌ ANAGHỊ EMEGHE - WINDOWS - 2019
Windows 10 nhọrọ anaghị emeghe
Ọtụtụ ndị ọrụ nke Windows 10 na-eche eziokwu ahụ na ha anaghị emeghe ntọala kọmputa - ma ọ bụ site na ụlọ ngosi ahụ site na ịpị "Ngalaba niile", ma ọ bụ site na iji nchịkọta Win + I, ma ọ bụ n'ụzọ ọ bụla ọzọ.
Microsoft ewepụtawo ihe bara uru iji dozie nsogbu ahụ na-enweghị mmeghe (a kpọrọ nsogbu ahụ Mkpọpụta 67758), ọ bụ ezie na ọ na-akọ na ngwá ọrụ a nke na-arụ ọrụ na "ngwọta na-adịgide adịgide" ka na-aga n'ihu. N'okpuru - otu esi edozie ọnọdụ a ma gbochie nsogbu nke nsogbu ahụ n'ọdịnihu.
Dozie nsogbu ahụ na paragraf nke Windows 10
Ya mere, iji dozie nsogbu ndị ahụ, ị ​​ga-eme ihe ndị a dị mfe.
Weghaara ọrụ ọrụ ahụ iji dozie nsogbu ahụ na peeji nke //aka.ms/diag_settings (N'ụzọ dị mwute, e wepụrụ ọrụ ahụ site na saịtị ndị ọrụ ahụ, jiri nchịkọta Windows 10, pịa "Ngwa sitere na Windows store") ma mee ya.
Mgbe ị kwusịrị, ihe niile ị ga - eme bụ pịa "Na - esote", gụọ ederede ahụ, na - ekwu na ngwá ọrụ njehie ahụ na - achọpụta kọmputa ugbu a maka njehie na - akpata nsogbu 67758 wee dozie ya na - akpaghị aka.
Mgbe ịmechara ihe omume ahụ, akụkụ nke Windows 10 kwesịrị imeghe (ịnwere ike ịmalitegharịa kọmputa gị).
Nzọụkwụ dị mkpa mgbe itinye ntụziaka ahụ bụ ịga "Ngalaba Mmelite na Nche" nke ntọala ahụ, budata mmelite dịnụ ma wụnye ha: eziokwu bụ na Microsoft wepụtara kpọmkwem KB3081424, nke na-egbochi njehie akọwapụtara na-eme n'ọdịnihu (ma ọ dịghị edozi ya n'onwe ya) .
O nwekwara ike ịbara gị uru maka ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na menu Malite adịghị emeghe na Windows 10.
Ngwọta ndị ọzọ nye nsogbu ahụ
Usoro a kọwara n'elu bụ isi, ma enwere ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ, ma ọ bụrụ na onye gara aga enyereghị gị aka, achọtaghị njehie, ma ntọala ahụ adịghị emeghe.
Gbalịa weghachite faịlụ Windows 10 na iwu ahụ Dism / Online / Cleanup-Image / RestoreHealth na-agbaso iwu ozugbo dị ka onye nchịkwa
Gbalịa ịmepụta onye ọrụ ọhụrụ site na akara iwu ma lelee ma ọ bụrụ na arụ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ mgbe ị na-abanye n'okpuru ya.
Enwere m olileanya na ụfọdụ n'ime ihe a ga - enyere gị aka, ị ga - agbanyeghachikwa osụgharị OS ma ọ bụ rụgharịa Windows 10 site na ịmepụta bọtịnụ pụrụ iche (nke, site na ụzọ, ị nwere ike ịmalite na - enweghị ngwa niile, na n'elu mkpọchi mkpọchi site na ịpị bọtịnụ bọtịnụ Ike ala, mgbe ahụ, mgbe ị na-ejide Ntinye, pịa "Malitegharịa").